Astrology Archives - YATHAZONE
လေ့လာမိသလောက် (၇) ရက်သားသမီးတွေရဲ့ စိတ်နေသဘောထားလေးတွေ
လေ့လာမိသလောက် (၇) ရက်သားသမီးတွေရဲ့ စိတ်နေသဘောထားလေးတွေ တနင်္လာ တနင်္လာသားသမီးတွေ ကတော့ အင်မတန် ဆရာလုပ်တဲ့နေ့နံပါ သူနဲ့တည့်တဲ့သူ ရှားပါတယ်။ အိမ်မှာပဲ ကျယ်တာပါ အပြင်မှာတော့ သူကြီးပဲ ခံလာ ရတာပါ ဆရာကြီး လုပ်ချင်ပေမယ့် ဘာမှမတတ်တဲ့ ကြီးပေါလောကြီး လိုပါပဲ.. ဒါပေမယ့် ဆရာတင်လိုက်ပြန်ရင်လည်း မရှိရှိတာ ရှာကြံပြီး ကူညီတတ်ပါသေးတယ် တကယ်တော့ ဆရာလုပ်ချင်ရုံပါ။ မျက်နှာရှစ်ခေါက်ချိုးနဲ့ မသိရင် သူ့လုပ်စာစား ရသလို ကြံအင် လက္ခဏာ ရှိပါတယ် အဲ့လိုပဲ နေတတ်တာပါ ဘယ်သူနဲ့မှ မခင်လွယ် ပါဘူး။ မနက်စောစော မထပါဘူး အစားအသောက် နည်းပါတယ် ဒါပေမယ့် ဝက်ဖြစ်မြန် ပါတယ်။ အသက်သာကြီးပေမယ့် စိတ္က …
B သွေး ပိုင်ရှင်များရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား B သွေးများဟာ တစ်ယောက်တည်း အေးအေးဆေးဆေး နေချင်ကြသူများ ဖြစ်ကြပါတယ်။ အားတဲ့အချိန်တိုင်း အခန်းထဲမှာ တစ်ယောက်တည်း နေရင်း ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ အလုပ်ရှုပ် နေတတ်ပါတယ်။ သိပ်မခင်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တွေ့ရင် ခပ်တည်တည် နေတတ်ပြီး အရမ်းခင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တွေ့ရင်တော့ နားညဉ်းအောင် ပြောတတ်တာ B သွေးတွေပါ။ လူတိုင်းကို မခင်တတ်လို့ မာနကြီးတယ်လို့ အထင်ခံရတတ်ပြီး ပေါင်းကြည့်မှ တကယ်ကို ရိုးသားဖြူစင် ကြတာပါ။ မိသားစုထဲမှာပဲ့ဖြစ်ဖြစ် သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်း ကြားထဲမှာဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ကို ပိုဂရုစိုက် ပိုချစ်တာ လိုချင်တတ်ကြပါတယ်။ အလိုလိုက်ခံရရင်လည်း အရမ်းပျော်တတ်ကြပါတယ်… အရမ်းခင်တဲ့ လူတွေအပေါ် တကယ့် စိတ်ရင်းမပါဘဲ …
လက်တွဲဖော် ဘယ်လိုလူလဲဆိုတာ လက်ဖဝါးခြင်းပူးကြည့်ရအောင်
လက်တွဲဖော် ဘယ်လိုလူလဲဆိုတာ လက်ဖဝါးခြင်း ပူးကြည့်ရအောင် လက်ဝါနှစ်ဖက်ကို ပူးကပ်ကြည့်ပြီးတော့သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်က ဘယ်လိုလူစားမျိုးလဲဆိုတာ ခန့်မှန်းရအောင် ဒီတခါ ပြောပြမှာကတော့ လက်နှစ်ဖက်ကို ပူးကြည့်လိုက်လို့ သင့်ချစ်သူ ဘယ်လို ပုံစံမျိုး ဖြစ်မလဲ ဆိုတာကိုပါ … ။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ ၁၀၀% မှန်တယ်လို့ စာရေးသူ မဆိုလိုပါဘူး။ သင့်ချစ်သူရဲ့ လက်ဖဝါးကို ကြည့်လိုက်ပါ … ။ သင့်ချစ်သူရဲ့လက်ဖဝါးက အချစ်လမ်းကြောင်းကနေ သူတို့ရဲ့ စိတ်နေ သဘောထားကို အနည်းငယ် မှန်းဆကြည့်လို့ ရနိုင်ပါတယ်နော်… စာဖတ်သူတို့ရဲ့ စိတ်သဘောထားနဲ့ တိုက်ဆိုင်တယ် မဆိုင်ဘူးဆိုတာကို ဝေဖန်ချက် ပေးလို့ရပါတယ် … ။ ၁။ လက်ဖဝါးပေါ်က အချစ်ရေးလမ်းကြောင်း အတူတူ …
( ၇ ) ရက်သားသမီးများအကြောင်းနှင့် စိတ်နေစိတ်ထားများ…
( ၇ ) ရက်သားသမီးများအကြောင်းနှင့် စိတ်နေစိတ်ထားများ… တနင်္ဂနွေ သားသမီးများ အကြောင်း အရမ်းကြီးချောတဲ့ထဲ မပါပေမဲ့ ရုပ်မဆိုးကြပါဘူး နှုတ်ခမ်းအလှ ပိုင်ရှင်တွေလဲ ဖြစ်တယ်… အိပ်တယ်ဆိုတာ သူ့တို့ရဲ့ အကြီးမားဆုံး ဝါသနာပါ …အစောကြီး ထရတာလဲ သေအောင်မုန်းတယ်…. သီချင်းတွေဟာ သူတို့အတွက် အကောင်းဆုံး သူငယ်ချင်းတွေပါ… စိတ်ညစ်စရာရှိရင် ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောပဲ တစ်ယောက်ထဲသာဝမ်းနည်းနေတတ်ပါတယ်… တစ်ယောက်ထဲ အေးဆေးနေရတာကို နှစ်သက်တဲ့ သူတွေပါ… အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ အရာတွေကိုသာ ရွေးချယ် တတ်သူတွေပါ….ငွေကြေးမှာလဲ လက်အရမ်း ဖွာတယ်…. အမြဲတမ်း လူကြီးတစ်ယောက်လို ရင့်ကျက်ချင်ယောင် ဆောင်တတ်ပေမဲ့ ကလေးစိတ်ကတော့ လုံးဝ မပျောက်သေးပါဘူး… ချစ်သူအပေါ် အရမ်းအချစ်ကြီးသလို တစ်ယောက်ဆို တစ်ယောက်ပဲ …
zawgyi လာဘ်တွေကတိတ် ငွေကမဝင်စိတ်ညစ်နေလျှင် …. …. …. ။ ။ ငွေကြေးကံတွေပွင့်အောင် … … … ။ ။ ဒီလိုပါ တချို့သောသူတွေမှာ ငွေကြေးတွေကအဆင်မပြေ ဘာလုပ်လုပ်ပေါ့ ။ လာဘ်တွေကတိတ် ငွေကမဝင်စိတ်တွေညစ် ရစရာရှိတာလေးတွေကလည်မရ ဖြစ်နေသူတွေ ၊ ကြုံကြတဲ့သူတွေရှိတယ်ဗျ ။ တခါက ကျွန်တော်ဆီကို အမျိုးသမီးတဦးရောက်လာတယ် ။ ကျွန်တော်လည်ပြည်ရွှေဆံတော်က ဗောဓိညောင်းပင်အောက်မှာအဓိဌာန်းဝင်တဲ့အချိန် ” ဘိုးတော်လေးကိုရှာနေတာ …… အိမ်ကိုသွားတော့ ရွှေဆံတော်မှာအဓိဌာန်းဝင်နေတယ် …. ညောင်ပင်အောက်မှာ ဆိုလို့ လိုက်လာတာ ဘိုးတော်လေးရေ …. ” ဆိုပြီ အရေးတကြီး …… ” အေးအေး ဘာကိစ္စရှိလို့လည်းပြောပါ …
နေ့နံအလိုက် ကံဇာတာ နိမ့်ပါး မှေးမှိန်တတ်သော အသက်အရွယ်များ
zawgyi နေ့နံအလိုက် ကံဇာတာ နိမ့်ပါး မှေးမှိန်တတ်သော အသက်အရွယ်များ နေ့နံအလိုက် ကံဇာတာ နိမ့်ပါး မှေးမှိန်တတ်သော အသက်အရွယ်များ မွေးနံအလိုက် အသက်အရွယ်အလိုက် ကံဇာတာ နိမ့်ပါး တတ်ချိန်များ ( ကလေးသူငယ်များမှာတော့ ကျန်းမာရေး နှင့် ပညာရေး ) အားနည်း တတ်ချိန်များကို အလွယ်တကူ ကြည့်ရှု သိရှိနိုင်ပြီး ဆိုင်ရာ ယတြာပိုင်းလေးတွေကိုလည်း ပြုလုပ် နိုင်အောင် တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။ မြန်မာ့ရိုးရာသေသ ဝိဇ္ဇာပညာရပ်အရ သုံးသပ် တင်ပြပေးထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား ။ တနင်္ဂနွေနေ့ဖွားများသည် …. …. …. ။ ။ အသက်အားဖြင့် ၆နှစ် ၊ ၁၃နှစ် ၊ …
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ တစ်လတာအတွက် ကံကြမ္မာဟောစာတမ်းကြာသပတေးသားသမီးများ
zawgyi ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ တစ်လတာအတွက် ကံကြမ္မာဟောစာတမ်းကြာသပတေးသားသမီးများ ဒီလအတွင်းမှာ သင့်အတွက် ကံဇာတာကတော့ မိသားစု အလုပ်အကိုင် စီးပွားရေးတွေ ထူးထူးခြားခြား တိုးတက်လာမည် ။ အိုးအိမ်ကိစ္စ ၊ နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စ တွေမှာလည်း ထူးထူးခြားခြား တိုးတက် အောင်မြင်ခြင်း မိသားစု ရည်ရွယ်ချက် ရည်မှန်းချက်များ ပြည့်ဝ အောင်မြင်မှု့ရရှိမည် ။ အလုပ်အကိုင်နှင့် ပါတ်သက်၍ မြောက်အရပ် ၊ အရှေ့မြောက်အရပ်တွေမှာ အခွင့်အရေး အခွင့်အလန်းများ ရှာဖွေသင့်သည် ။ ထိုအရပ်ဒေသများတွင် အောင်မြင်မှု့ ရရှိနိုင်သည် ။ မိမိနေအိမ်သို့ အသက်အရွယ် ကြီးရင့်သော ရဟန်း သံဃာတော် တစ်ပါး ထူးထူးခြားခြား ကြွရောက်လာမည် ။ …
Total views : 689092